Cudurka Dabeysha oo laga ciribtirayo soomalia – idalenews.com
Cudurka Dabeysha oo laga ciribtirayo soomalia
Idalenews:- dabaal dagyo lagu taagyeerayo ayaa ka socdaa gobolada soomalia, ka soo ula jedkiisu yahay olala looga soo hor jeedo ciribtirka dabiisha Soomalia.
Home MAQAALO Soomaaliya oo laga ciribtiray Cudurka Dabeysha
Soomaaliya oo laga ciribtiray Cudurka Dabeysha
August 12, 2017 355 0
Muqdisho(SONNA)–Sanad walba, 24 bisha Oktoobar waxaa la xusaa “Maalinta Cudurka Dabeysha”. Guddiga Dabagalka Madax bannaan ee Cudurka Dabeysha, ayaa ku kulmay Magaalada London si ay u qiimeeyaan horumarka laga gaaray dabargoynta cudurka dabeysha.
Haddaba waxaa goor dhow soo yeeray war farxad leh oo ku saabsan in Soomaaliya laga ciribtiray gabi ahaanba Cudurka dabeysha ama Polio loo yaqaan.
Kiiskii ugu dambeeyay waxaa la soo sheegay sanad iyo bar ka hor, balse waxaa mar kale laga sheegay Dhulka Soomaalidu degto ee Itoobiya, blasé markaan ayaa la shaaciyay in laga suuliyay Dhulka Soomaaliya, iyadoo guusha laga gaarey joojinta cudurka dabeysha uu yahay natiijo ka dhalatay olole ay si fiican dhaqaale ugu bixiyeen oo ayna isku soo dubbarideen maamulada, iyaga oo taageero ka helaya hay’adaha UNICEF iyo WHO.
Top news: Khaemba arrested while covering Kibera protests